भूकम्प: केम्यान टापुहरूमा पर्यटकहरू सुरक्षित छन्?
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » ब्रेकिंग यात्रा समाचार » भूकम्प: केम्यान टापुहरूमा पर्यटकहरू सुरक्षित छन्?
हवाई अड्डा • ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार • ब्रेकिंग यात्रा समाचार • केम्यान टापु समाचार • सरकारी समाचार • लक्जरी समाचार • समाचार • रिसोर्ट्स • सुरक्षा • यातायात • यात्रा गन्तव्य अपडेट • यात्रा तार समाचार • अहिले प्रचलनमा • विभिन्न समाचार
केमान टापुमा आजको 7.7.? भूकम्प पछि आगन्तुकहरू कत्तिको सुरक्षित छन्?
केमेन टापुको टुरिस्ट प्याराडाईज जर्ज टाउनको miles० माईल पूर्व inated० माईल पूर्वको भूकम्पको प्रभावबाट 7.7..80 परिमाणको भूकम्पको प्रभावले हल्लाएको थियो, सरकारी सूचना सेवाहरूको अनुसार। भूकम्प पछि केम्यान टापुको अवस्था र केम्यान टापुको ट्राभल एन्ड टुरिज्म उद्योगको बारेमा हालसालै जानकारी दिइएको छ।
यो केम्यान टापुहरूको लागि एक चमत्कार हो जस्तो देखिन्छ।
एक मा समुद्र तट क्यामेरा केमैन द्वीप रिजर्ट भूकम्पको ठीक पछि दर्शकहरूले देखाए, पोखरी, छुट्टी मनाउँदै। अहिले, समुद्र तट सुनसान भएको देखिन्छ2युवा पुरुषहरू बाहेक। कुनै पनि छुट्टी रिसोर्ट र होटेलले कुनै क्षति वा चोटपटक रिपोर्ट गरेन
केम्यान टापुहरू एयरपोर्ट प्राधिकरणले यस समयमा सामान्य रूपमा काम गर्दछ, तर एयरपोर्ट टर्मिनल खाली गरियो र उडानहरू मंगलबार दिउँसोको भूकम्पको दौरानमा रोकिएको थियो। सबै एयरपोर्ट सुविधाहरू रनवे, एप्रन र ट्याक्सीवे सहित क्षतिहरूको लागि निरीक्षण गरिएको थियो। एक पटक यो पुष्टि भयो कि एयरपोर्ट टर्मिनलमा कुनै क्षति छैन, उडान कार्यहरू सामान्य रूपमा जारी नै छ।
केम्यान टापुहरूमा सडक क्षतिहरू
जर्ज टाउनका केही व्यवसायहरूले आज दिउँसोको भूकम्प पछि चाँडै बन्द हुने छनौट गरेका छन्।
पानी प्राधिकरणका प्रवक्ता भन्छन् कि कम्पनीले आउटजेजको बारेमा बढि रिपोर्टहरू प्राप्त गरिरहेको छ र यसको टोलीले मुद्दाको मूल्याing्कन गरिरहेको छ र चाँडै नै अपडेट हुनेछ।
सरकारी स्कूल बुधबार बन्द हुनेछ स्कूलहरू संरचनात्मक आकलनको लागि अनुमति दिन बन्द गरिएका छन्, ह्याजार्ड मैनेजमेन्ट केम्यान टापुका अनुसार।
रेड क्रस आश्रय हुल्दा एवेन्यू, जर्ज टाउनमा साँझ 6.30.. .० मा खुल्दै छ।
प्रधानमन्त्री र गभर्नर आज दिउँसो सीआईटीटीभीमा देखाए कि सुनामीको खतरा बितिसकेको छ। प्रिमियर एल्डन म्याक लाफ्लिन, "मलाई थाहा छ कि मानिसहरू धेरै चिन्तित छन् र चिन्तित छन् र मेरो आफ्नै घरमा लगायत संरचनात्मक क्षति भएको छ," उनले भने।
"यो कृतज्ञताको गहिरो भावनाको साथ हो कि म भन्छु कि यस्तो लाग्दैन जस्तो कि कसैलाई चोट लागेको छ र हामीलाई सबैभन्दा विनाशकारी परीक्षा हुनसक्ने सबैभन्दा खराब अवस्थाबाट जोगाइएको छ।"
उनले भने, "मलाई थाहा छ यो टापुमा हामी सबैको लागि यो नै अत्यन्त डरलाग्दो घटना हो र त्यहाँ यस सुनामीको जोखिम कम छ तर त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई सावधानीका रूपमा दोस्रो तलामा जानका लागि सल्लाह दिइन्छ।"
उनले भने कि जनता अफ्टर शक्सको खतरादेखि सचेत हुनुपर्छ।
राज्यपालले केम्यान ब्राक र ग्रान्ड केम्यान दुबैलाई संरचनात्मक क्षति भएको संकेत गरे। उनले भने कि अग्निशमन सेवा र सार्वजनिक निर्माण विभागले ती घटनाहरूको प्रतिक्रिया जनाइरहेको छ।
प्रिमियर एल्डन म्याक लाफलिनले बुलेटिनमा छोटकरीमा भनेका थिए, "हामी सकेसम्म मिडिया फोरमहरूमार्फत जनतामा बढी जानकारी गराउन सक्दो गरिरहेका छौं।"
उनले भने कि खतरनाक व्यवस्थापन वेबसाइट www.caymanprepared.gov.ky आधिकारिक जानकारी को लागी सबै भन्दा राम्रो स्रोत थियो।
केम्यान एयरवेजले सबै अनावश्यक सेवाहरू निलम्बित गरेको छ। ग्रान्ड केम्यान, केम्यान ब्राक र लिटल केम्यान, साथ साथै केम्यान एयरवेज रिजर्भेसन कल सेन्टरमा टिकट कार्यालय बुधवार सम्म बन्द रहनेछ।
सबै उडान कार्यहरू आज र भोली तालिका अनुसार जारी हुनेछ, एक CAL प्रेस विज्ञप्ति अनुसार।
केम्यान टापुहरू, बेलायती प्रवासी क्षेत्र, पश्चिमी क्यारिबियन समुद्रमा is वटा टापु समेट्छ। ग्रान्ड केम्यान, सब भन्दा ठूलो टापु, यसको समुद्री तट रिसोर्टहरू र विविध स्कुबा डाइभिंग र स्नोर्कलिंग साइटहरूका लागि परिचित छ।
केम्यान ब्र्याक गहिरो समुद्री माछा मार्ने भ्रमणका लागि लोकप्रिय प्रक्षेपण बिन्दु हो। सानो केमेन, सब भन्दा सानो टापु, विभिन्न वन्यजन्तुहरूको घर छ, लोपोन्मुख इगुआनासदेखि लिएर समुद्री जन्तुहरू जस्तै रातो खुट्टाका बूबीजस्ता।